युगल जोडी आ’गोमा अंकमाल गरेर मृ’त्यु रोजेको भन्ने घटनाको वास्तविकता खुल्दा सबै चकित ! – Online Saptarangi
October 19, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on युगल जोडी आ’गोमा अंकमाल गरेर मृ’त्यु रोजेको भन्ने घटनाको वास्तविकता खुल्दा सबै चकित !
काठमाडौं । ‘प्रेम अन्धो हुन्छ’ हामी धेरैले सुनेका छौँ । अर्को महत्वपूर्ण भनाई, ‘लडाँई र मायामा सबथोक जायज हुन्छ ।’ यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशको विजयवाडाबाट एक जोडीको दुःखद अन्त्य भएको छ ।
वास्तवमा घटना के भने आरती र अंकीत गत चार बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । यस बीच, ती दुई बीच केही मनमुटाव भएको थियो । त्यसपछि आरती र अंकीतले सम्बन्ध समाप्त गर्ने निर्णयमा पुगे । आरतीले अंकीतसँगको सम्बन्ध समाप्त गरेर आफ्नो जीवन आरामले जीउन थालिन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
नविल बैंकको त्यो भिडियो जसले छोयो नेपालीको मन (हेर्नुहोस भिडियो)
धेरै मोटाउनु भयो ? आजैबाट थाल्नुहोस यी काम